अबको चुनावमा मतदान गर्दा केलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः कार्तिक २०, २०७४ - साप्ताहिक
विगत २८ वर्षदेखि देशलाई लुटेर कंगाल अनि विश्वकै गरिब देश बनाउन सक्रिय ८० वर्ष कटेका कुनै भिजन नभएका तर परिवार, नातागोता अनि आफ्ना कार्यकर्ताको मात्र ख्याल गर्ने स्वार्थी पुरानै नेताहरूलाई नै जिताउने ।
डन, गुन्डा, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी एवं दलालहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर मतदान गर्नुपर्छ, देश १० वर्षमा स्विट्जरल्यान्ड बन्छ ।
ईश्वर शाही ठकुरी
पार्टी हेर्नुपर्छ । साना पार्टीले स्थान मात्र खोज्ने हुनाले काम गर्दैनन् । बरु ठूलो एउटै पार्टी हेरेर बहुमत दिन सके केही विकास हुन्थ्यो कि ?
मेरो कांग्रेस, मेरो एमाले, मेरो माओवादी अनि मेरो नेतालाई प्रथमिकता दिनुपर्छ अनि मात्र बन्छ देश ।
गुन्डाहरूलाई मत दिनुपर्ने हुन्छ । रास्ट्रवाद जोगाउनेहरू तिनै हुन् ।
सधैंझैं आफू कुन झुन्डमा छु, देशलाई भन्दा पनि को शक्तिमा पुग्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ भनी जनताले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखी भोट गर्दा ठीक हुन्छ ।
दुई बोतल रक्सी, दुई छाक मासुभात, दुई–चार हजार पैसा जसले दिन्छ उसैलाई मत दिने ।
पहिले गाँठ अनि मात्र छाप ।
चाहेको पार्टीलाई प्राथमिकता दिने नि ।
स्वस्तिक छापलाई, नत्र मत बदर हुन्छ ।
काम गर्ने व्यक्तिलाई भोट दिने हो ।
चुनाव चिह्नलाई प्राथमिकता दिने ।
जसले जनता तथा व्यापारीहरूलाई थर्काएर नेतागिरी गर्छ उसैलाई मत दिने ।
चुनाव चिन्हलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
विकास, शान्ति र सुशासन ।
देशको रक्षा गर्ने अनि जनताको समिपमा रहने व्यक्तिलाई ।
जताबाट आउँछ ठूलो गाँठ उतै लगाउनुपर्छ छाप ।
बोरामा पैसा बोकेर आउनेलाई ।
जोसुकैलाई दिए पनि के मतलब ?
असल व्यक्तिलाई ।
हाम्रालाई होइन राम्रालाई भोट दिनुपर्छ । पार्टी हेरेर होइन काम हेरेर भोट खसाउनुपर्छ ।
जुन भेडाको भुत्ला जति पटक काटेर, जहाँबाट ल्याए नि भेडो भेडो नै हो, कस्तुरी बन्ने होइन । केलाई प्राथमिकता दिनु ? दोधारमा परियो ?
हाम्रो नभनी राम्रोलाई जिताउने हो यसपालि त ।
सीताराम कट्टेल र कुन्जना घिमिरे (धुर्मुस–सुन्तली ) जस्ता काम गर्ने व्यक्तिलाई दिन मन थियो तर कोही फेला परेका छैनन् ।
भ्रष्टाचारी तथा काम नलाग्ने नेतालाई ।
सक्षम युवा नेतृत्वलाई ।
राष्ट्र र जनताका लागि नि:स्वार्थ राजनीति गर्ने व्यक्ति हेर्नुपर्छ ।
बिग्रिएका नेतालाई मत नदिने अब ।
सही उम्मेदवार छनोट गर्ने ।
बहुमतको स्थिर सरकार होस् । राम्रो नेतृत्व छनौट गर्नुपर्छ ।
नेपाली जनताको भलो हुने नेता छान्नुपर्छ ।